नयनराज पाण्डे - नेपाल
धुनियाहरूले धुनकीलाई एउटा सानो मुद्गलजस्तो डल्लो काठले हिर्काउँदा एक खालको संगीत बजेजस्तै लाग्थ्यो । एउटै लयमा बजिरहेको रुखो संगीत । तुन्न तुन्न ।
नयनराज पाण्डे, पुस १६, २०७२
संस्मरण । इँजार
‘ए आशा ! कहाँ छ्यौ अचेल तिमी ? के तिमीले अझै ओठमा लाली लगाउँछ्यौ ? अझै गाजल लगाउने गरेकी छ्यौ आफ्ना ठूलठूला आँखामा ? रातो धागोले दुई चुल्ठो बाट्छ्यौ अझै पनि ? तिम्रो केशबाट के अझै आउँछ चमेली तेलको बास्ना ? पाउमा पाउजू लगाउँछ्यौ अझै पनि या नियतिको निर्दयी जंजिरले बेरिएकी छ्यौ अचेल ?’
नयनराज पाण्डे, भाद्र ३०, २०७२